Window Server 2003 (မြန်မာ)
ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပါပြီ . window server 2003 ကို စိတ်ဝင်စားသူများ လေ့လာလို့ရပါတယ် . စာရေးဆရာကတော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ ဦးဇော်လင်း ရေးသားထားတာပါ . မူရင်း scanner ဖတ်တဲ့သူ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ မသိပေမယ့် ကျေးဇူးတင် ပါတယ်ဗျာ . ကျွန်တော့်ကတော့ ထိုင်းမှာ ရောက်နေတာနဲ့ scanner ဖတ်ဖို့ အချိန်လု ရတာနဲ့ကို မဖတ်ဖြစ်ပါဘူး . နောက်ပိုင်းတော့ လုပ်ပေးပါဦးမယ် .. လုပ်ပေးချင်ပါတယ် . ပေးစရာ တွေလဲ အများကြီး ရှိပါတယ် .